PressReader - Ilanga langeSonto: 2017-08-27 - Kuyihlazo ukuhlulwa kwabaculi yiculo lesizwe
Kuyihlazo ukuhlulwa kwabaculi yiculo lesizwe
SIVULA AMEHLO ABACULI: KNOWLEDGE SIMELANE
okungajwayelekile wangasuka emathuneni ekhononda ngokuthi kaliculwanga lonke iculo lesizwe. Umculi engabe ngimphethe ngaleso sikhathi umanesi Cele wabe eseyophuma ngesango ehamba wabizwa ngokushesha ngumnu Bheki Cele ukuba azoxazulula inkinga.
Manesi lowo owabe eqeqeshekile elazi lonke iculo lesizwe walicula kamnandi elinika isizotha salo umnu Mandela wabonga kwaba yimake egibela emotweni wahamba.
Iculo lesizwe kalisiyo igqomu, kumbe iculo lentokozo, liyiculo elijulile elinemibandela kosuke elicula. Leli yiculo elihloniphekile okumele oliculayo azivuselele ubuzwe bakhe khona, lapho ebe ekhulekela ukuthula nokusimama kwezwe.
Kusiphatha kabi ukubona abantu uma kuculwa iculo lesizwe ubafice begcaluza, abanye besineka kucace ukuthi abayazi inqubo okumele bayilandele uma kuculwa leli culo.
Noma singakhethi iphela emasini ngezinkolo ezikhona kuleli kepha umqambi walo u-enoch Sontonga waliqamba engazenyezi ngokuthi ungumkrestu. Uzwakala lapho ethi “Morena boloka Sechaba saHesu” okungukuthi Nkulunkulu vikela isizwe sakithi.
Sisuke sikhuleka uma sicula leli culo, ngisho seliphethwa kukhona lapho ayethe khona “Makube njalo kuze kube ngunaphakade”. Amakholwa ayazi ukuthi igama elithi “Ameni” lichaza ukuthi makube njalo.
Akuphunywe umkhankaso wokufundiswa kwesizwe sonke ukucula ngendlela eyiyo iculo lesizwe, asibona abantu abakholelwa ezintweni ezingabonwa kepha sesingaze sisole ukuthi izinto zimapeketwane kanjena nje yingoba kwasephalamende lethu leli culo liculwa ngokudonsiswana, kukhona abalicula ngendlela endala kube khona abalicula ngendlela eyahlelwa kahle ngusolwazi Mzilikazi Khumalo.
Akenzanga iphutha ngokujobelela izinhlamvu zezinye izizwe ngoba laphuma izwi elithi siyisizwe sezinhlanga ezahlukene esiwuthingo lwenkosazane ( rainbow nation).
Ukuze leli culo liculwe ngendlela efanele, akuphele ukucwasana ngaphakathi ezinhliziyweni, ngeke liculeke kahle uma kukhona osazonda esinye isizwe. Cishe kube ngconywana ngasendlini kagondwana, kusengumqansa ukuculwa kwaleli culo kwabanye bezinye izinhlanga. Asibafundise nabo baziphimise kahle izinhlamvu zesintu bangabizi u”sikelela”ngo”sigelela”.
Lokhu esikusho lapha kugqama kahle uma kunemidlalo yamazwe omhlaba, iqembu lakithi selicula kuyoyonke imikhakha yezemidlalo. knowledge.simelane@ilanganews. co.za